Yusuf Garaad: Xeer iyo Xeer - Jajab
Guddoomiyaha Baarlamaanka Somaliland Cabdiraxman Cirro (dhex) iyo Guddoomiye Ku Xigeenka Koowaad Baashe Maxamed Faarax (bidix) oo ah laba mas’uul oo aan ixtiraamo waxay maanta ku kaceen gef iyo foolxumo.
Inkasta oo ay raalli gelin bixiyeen haddana Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo Ku Xigeenkiisu in ay isku feeraan Golaha Wakiillada Soomaaliland oo fadhiya waxay ahayd sharaf-dhac.
Inkasta oo maalmahan aan murankooda si xiiso leh ugala socday saxaafadda, haddana doorkeyga ma ahan in aan isku dayo in aan labada mas'uul midkood aan si gooniya farta ugu fiiqo. Mana doonayo in aan mid la safto.
Waxaan arrintaan maanta Hargeysa ka dhacday aan u soo qaatay ma ahan in aan uga sii daro ceebta labada mas’uul. Waxaa iiga muhiimsan casharka laga baran karo.
Kala dambeyn, shuruuc iyo xeerar kala haga dadka marka la hareer maro waxa keliya oo dhici karaa waa fowdadii maanta ka dhacday Golaha Wakiillada Somaliland.
Khalad wuu dhacaa, laakiin waxaa la isku dhaafaa sida loo saxo ama looga gaabiyo in la saxo.
Posted by Yusuf Garaad at 19:32:00
Yusuf Garaad 12 September 2015 at 19:49
Fadlan halkan ku reeb aragtidaada. Mahadsanid.
abdiali jama 12 September 2015 at 21:00
Yusuf Garaad aad baad u mahadsantay, waxna maad xumeyn oo midkoodna maad eedeyn, waxayse tahay ama u waa khalad beri hore oo iyagoo mucaarad ahaa ay kuraasta ku bahoobeen lana baxeen iyagoo laba xisbi mucaarid ahaa in ay ku shuraakoobaan wax la yidhaa shir guddoon baal marsan xeerkii uu lahaa Golahu.Waxaana Xeer jajabkaasi keeney in maanta uu ka xishoon waayo Guddoomiye ku xigeenkii Godoomiyihii Golaha oo uu ka dhinac hadlo isla markaana la maamusho waayo wuxuu barkan yahay oo lagu yidhi ku dhaqma markii ay hore usoo dhex gashay Guurti ku sheega HADA SII SAQIIRTEY ee ay ka joogaan Afar odey ragii ruug cadaaga ahaa ee Madaxdhaqameedku so xuleen. Waa runtaa XEER JAJAB iyo ISXAMBAARBA ku dhaqankiisu wuxuu keena iska hor imaad,
ahmedifcc@gmail.com 13 September 2015 at 10:28
Waan daawaday waxa dhacay, mana quruxbadnayn hayeeshee Ustasd yusuf waa ka garnaqikartaa muuqaalka , shir laba gudoomiye hagaamiyaan ee baarlamaan kaliya fadhigii, waa muuqataa cida fawdada markaa wada, baarlamaanada waa iska horyimaadaan, oo shirku socon waayaa ,oo Gudoonku shirka xiraa in xaaladu ka dagayso, hadiise xaaladu soo gaartay meeshii aan arkaynay wax gacan ka hadal looga badbaado ma muuqan, sharciyada hadii la raacayo haamaha shidaalka barbara dab kuma socon eego,aankooda si miirqaba ayaa lagu gaari karay, waqti ku filana waa la siin karay, ee waxay ila tahay wax kale ayaa ku hoos qarsan,waana mahadsantahay,by Ahmed Ifcc
Hamdi Ahmed Mahamud 13 September 2015 at 18:43
Yuusuf waa sax qalad wuu dhacaa lkn cashir in laga qaato aa muhiim ah somalind tan waxay u tahay cashir aan la iloobi doonin waxana laga baran karaa nidaam la aanta iyo kala danbeen la aanta inay waxwalba dumiso
Hwa Jurong 15 September 2015 at 15:20
cabdi satar 22 September 2015 at 18:40
Khilaafka siyaasadeed ee Soomaalilaan ku soo noqnoqdaa waa mid ka soo jeeda hirdanka sharciga iyo sharci darrada. Ma jiraan hay’ado garsoor oo si madax bannaan uga garnaqi kara
khilaafaadka sharci ee dalka ka dhaca, haddii ay jiraanna hannaanka ay u dhisan yihiin ayaan u saamaxi karin inay waajibaad intaa le’eg gutaan. Taasi waxay meesha ka saartay kalsoonidii lagu qabi lahaa awood dhexdhexaadisa awoodaha qaran ee maalin walba madaxa iskula jira. Si taa la mid ah, ma jiro shacab si caqli ku dhisan uga garsoori kara murannada sharci ee dalka la hadhay iyo garasho bulsheed oo dhaaddan qiyamta sarraysa ee sharciga.
Murannada sharci ee ka dhex oogma golayaasha iyo axsaabta kala duwan ee qaranka waxa badiba hadheeya dareenno dahsoon oo siyaasi ah. Mar walba waxa is haya laba dhinac; laba qof, laba kooxood, iyo laba danood. Labada dhinac ee is hayaa ma wada saxnaan karaan, mana wada khaldanaan karaan. Waa inuu jiraa dhinac saxsan oo dooddiisu sharciga waafaqsan tahay iyo mid khaldan oo mawqifkiisu sharcidarro yahay. Sidaa darteed, mar kasta waxa jira dhinac badheedhsan oo si indho la’aan ah ugu tumanaya sharciga. Waxa kale oo jira dhinac sharciga ku taagan, laakiin si khaldan sharci wax ugu doonaya. Labadaa oo waayay cid u garsoorta ayaa xaajada ka dhigay mid magansata odayaal cumaammado sita oo magacyo reereed ku xoogsanaya iyo dad kale oo badan oo wejigooda ka ganacsanaya.